Uyilo lwewebhu: Ayisiyiyo malunga nawe | Martech Zone
Uyilo lwewebhu: Ayisiyiyo ngawe
NgoLwesine, Julayi 23, 2009 NgoMvulo, Juni 2, 2014 UJon Arnold
Ngaba sowuza kuthatha indawo enkulu yokuyila kwakhona iwebhusayithi? Ungathini malunga nokwakha ngokutsha isoftware? Ngaphambi kokuba ungene ngaphakathi, khumbula ukuba umlamli wokugqibela womgangatho ayinguwe, ngabasebenzisi bakho. Nanga amanyathelo ambalwa okuqonda ngcono iimfuno zabo kunye nokuziphatha ngaphambi kokuba uchithe naziphi na iidola zenkqubo:
Yenza uphando lwakho lomsebenzisi
Qala ngayo nayiphi na idatha yobungakanani, enje kubahlalutyi, esele ubonile ukuba benzani abasebenzisi bakho (okanye abenzi). Ngolwazi olongezelelekileyo, ungavavanya indawo yangoku okanye isoftware ukuze uzibonele ngokwakho ukuba yintoni evuyisayo kunye neyona ikhathaza abasebenzisi bakho. Thetha noogxa bakho kwintengiso okanye kwinkonzo yabathengi ukuze ufunde imiba yangoku kunye neqhubekayo yomsebenzisi. Nokuba le datha yophando sele ikhona kwingxelo kwenye indawo, yenza ixesha lokuthetha. Uvelwano olwenziwe kwincoko yokwenene nabantu kwimisele Uyakuxhobisa ngokwendalo ukuba wenze izigqibo zoyilo ngakumbi zomsebenzisi kunye nezigqibo zophuhliso.
Ngokwenyani yenza loo nto iiprototypes (isininzi)? Akukho mntu wenza iprototype efanelekileyo kwitrayi yokuqala. Kodwa luluvo olo: ukusilela ngokukhawuleza, ngokungabizi kakhulu, kwaye rhoqo kangangoko kunokwenzeka usazi ukuba iteration nganye ikusondeza kwisisombululo esifanelekileyo ukwakha. Ngokuqinisekileyo ungakha iiprototypes ezifanelekileyo nge-HTML okanye ngeFlash, kodwa i-Acrobat, iPowerpoint, kunye nephepha kunye nepensile zisisixhobo esihle sokufumana izimvo zakho kwifomathi ebonakalayo. Ngokwenza njalo, unganxibelelana ngcono, uvavanye kwaye uvavanye izimvo zakho. Ukuthetha ngovavanyo?
Xa abanye becinga ngokuvavanywa kwabasebenzisi, bacinga iingubo ezimhlophe zelebhu kunye neebhodi eziqhotyoshwayo. Ngelishwa, abaninzi bacinga ukulibaziseka kunye neendleko ezongezelelweyo. Xa unyanzelwe ukuba ukhethe phakathi koku kwaye kungabikho vavanyo lomsebenzisi konke konke, uninzi lukhetha kamva. Ngeentloni! Kwiiprojekthi ezincinci okanye abo banomhla obekiweyo wobubi, thatha indlela ye-guerilla: fumana abantu osebenza nabo abayi-6 ukuya kwabali-10, abazali, abatshatileyo, abamelwane (nabani na ozimisele ukunceda) kwaye ubaqwalasele ngokukodwa xa begqibezela umsebenzi omnye okanye emibini ebaluleke kakhulu. kumzekelo wakho. Oku akuyi kukunika konke ukuqonda okanye iingxelo ezintle ukuba uvavanyo olusebenzayo olusebenzayo lubonelele, kodwa ukuvavanya nokuba ngumntu omnye ungaphezulu kwe-100% kunokuvavanywa akukho namnye. Iziphumo zinokumangalisa okanye zikwenze buhlungu, kodwa kungcono ukuzazi ngoku ngoku emva kokuba iprojekthi yenziwe ngenye indlela.
Kuyinyani ukuba thina bantu bathanda izinto ezikhazimlayo, ezintle. Kwitekhnoloji, izinto ezilungiselelwe kakuhle zibonwa njengelula ukuzisebenzisa kunezo ezingayilwanga. Oku akuthethi ukuba iprojekthi yakho kufuneka ibe kukhuphiswano lobuhle, nangona kunjalo. Umzekelo, khawufane ucinge ukuba uyilo lwesikrini sikaGoogle lusebenzise imifanekiso etyebileyo kunye nokucaciswa kokutshintsha kwescreen. Ngelixa oku kunokuba nomtsalane kolunye useto, iya kuba yingxaki epheleleyo kwiscreen sokukhangela. KwiGoogle, kwaye uninzi lwabanye, uninzi entle uyilo lwescreen ihlala ilula.
Sazi kakuhle uxinzelelo kwiprojekthi entsha ngokukhawuleza fika emsebenzini ukwakha into. Ngelishwa xa amanyathelo afana nophando lomsebenzisi, iprototyping, kunye nokuvavanywa kwabasebenzisi zizinto zokuqala ekufuneka zihambe xa uhlahlo-lwabiwo mali kunye namaxesha exesha eqinisiwe. Isimanga kukuba ezi ziya kuhlala zihlala ugcine ixesha kunye nemali ekuhambeni kwexesha, kwaye ekugqibeleni ikugcine ungazi ngokwakha uhlobo olujongeka ngcono lwezinto ezingasebenziyo.
tags: uyiloamavauyilo lomsebenzisiuxkuyilo web
UJon Arnold ngumseki kunye nomongameli weTuitive, a uyilo lomsebenzisi inkampani eyenza iiwebhu kunye neeapps eziselfowuni zisebenziseke lula (kwaye zikhangeleka kakhulu!)
Umama wazo zonke iiNkcukacha
I-WordPress: Yongeza uLwazi loMbhali kwibar esecaleni
Hayi uDougy! Esi sithuba sabhalwa ngumhlobo wethu uJon Arnold waseTuitive-iarhente emnandi edolophini egxile ekwakheni uyilo lwewebhu oluncomekayo olwandisa amava omsebenzisi.
Ayifanelanga ukuba ibe nzima kakhulu ukujika ibe yiplagin eneneni.
Sele usebenza kuyo, Dave! Ithunyelwe ivela kwiVerizon yam iBlackBerry
Ukusuka: Izaziso ze-IntenseDebate